SWOT Analysis - Spiceworks Myanmar
Life Style Others Work Style
ညီမကတော့ Spiceworks Myanmar မှာ Web Developer position နဲ့ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြတ်နိုး ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ညီမ ယခုတပတ်မှာတော့ Strategic Planning တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SWOT Analysis အကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါရှင့်။
SWOT ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီမှာ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေ ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ ဒါတွေကတော့ S ဆိုတဲ့စကားလုံးက Strength , W ဆိုတာက Weaknesses , O အတွက်ကတော့ Opportunities နဲ့ T ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်တော့ Threats ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြနေတဲ့ SWOT analysis ကတော့ အပေါ်ကပြောပြသွားတဲ့ ၄ ခုလုံးကို ကိုယ့် Business မှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ နည်းစနစ်(technique) တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ technique လေးကတော့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက်ပါ အကျိုးရှိ အသုံးဝင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုပါ SWOT analysis ကနေတဆင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ထို ၄ ခုအနက်မှ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များသည် လူတစ်ယောက်၏ အတွင်းစိတ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် internal factors ဟုခေါ်ဆိုပြီး အခွင့်အရေးများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများသည် အပြင်ဘက်လောကမှလာသော အချက်များဖြစ်သောကြောင့် external factors ဟုခေါ်သည်။
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ SWOT ကို အသုံးပြုကြပါသလဲ?
ပြသနာတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖြေများကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုကြပြီး အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ/မရှိကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါများမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်သလို ဆုံးဖြတ်ချက်များချသည့်အခါများတွင်လည်း SWOT analysis က အသုံးဝင်ပါတယ်ရှင်။
အားသာချက် (Strength) ဆိုတာဘာလဲ?
အားသာချက်ဆိုတာ သူများနှင့်မတူ တမူထူးခြားနေတဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အားသာချက်က ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာလား? နည်းပညာအရမ်းတော်နေတာလား? ရိုးရိုးသားသားနေတတ်တာလား? အစရှိသည်ဖြင့် လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ အားသာချက်တစ်ခုစီရှိကြပါတယ်။မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်းး (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာ သိရှိဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင့်။ မိမိ၏ အားသာချက်ကို သိရှိသောသူက ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မိမိ၏ အားသာချက်ကို မသိရှိသေးသောသူများအနေဖြင့်လည်း မိမိကိုယ်ကို အမြဲတမ်း မေးခွန်းထုတ်နေသင့်ပါတယ်ရှင့်။
အားနည်းချက် (Weakness) ဆိုတာဘာလဲ?
အားနည်းချက် ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်သတိထားမိသည်ဖြစ်စေ သတိမထားမိသည်ဖြစ်စေ အားသန်မှုမရှိသော မလုပ်နိုင်သော အချက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်တိုင်၏ အားနည်းချက်ကို ရှာဖွေသင့်သည်။ ထိုမှသာ မိမိအားနည်းချက်ကို အချိန်ပေးဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ အားနည်းချက်ကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည် မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် အနည်းဆုံးအခြေအနေထိလျော့နည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးလက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါတယ်ရှင့်။
အခွင့်အရေး (Opportunity) ဆိုတာဘာလဲ?
တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်စေမည့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါတွေကို Opportunity လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ အခွင့်အရေးဆိုတာ မိမိဆီသို့ရောက်လာတတ်ပါတယ် ရောက်လည်းရောက်လာဖူးမှာပါ။ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ရပ်မိမိထံရောက်ရှိလာမည့် အချိန်ရောက်လျှင် ကိုယ့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ Stength (စွမ်းအား) နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ထိုအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်နေပြန်ပါတယ်ရှင်။ ဒါမှသာ လက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြိမ်းခြောက်မှု (Threat) ဆိုတာဘာလဲ?
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (သို့မဟုတ်) လူတစ်ယောက်ကို မကောင်းသောရလဒ်များပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သော ပျက်စီးစေနိုင်သော မည်သည့်အရာကိုမဆို ခြိမ်းခြောက်မှု ဟုခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ‌Threat ဆိုသည်မှာ external factor ဖြစ်သည့်အလျောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် အကျိုးမပြုနိုင်သော အနေအထားများလည်း ရှိနေတတ်ပါသည်။
သို့ပေမဲ့လည်း ဘဝထဲက အပြီးအပိုင်ထွက်သွားအောင် လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ထိုခြိမ်းခြောက်မှုများကို မိမိအနေဖြင့် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမလဲ စသည့်နည်းလမ်းများကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
SWOT analysis ၏ အဓိကအချက်များ (Key Points)
SWOT Analysis ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ရိုးရှင်းပြီးတော့ အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။ မိမိတို့ လိုအပ်နေသော အရာများကို ဖြေရှင်းရန်၊ အန္တရာယ်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်ရန်နှင့် အောင်မြင်မှုများအတွက် အခွင့်အလမ်းအများဆုံးရရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုး နှင့် လှုပ်ရှားမှုများမဆို အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နားလည်ရလွယ်ကူတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဝင်နိုင်သော နည်းစနစ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
SWOT analysis အသုံးပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
SWOT Analysis ၏အဓိကအားသာချက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သာရှိခြင်း
သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအကြောင်းကို နားလည်သူတိုင်း လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုနိုင်သော analysis တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်သိပ်မရှိသည့်အခါ SWOT Analysis ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
SWOT analysis ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း/ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ မည့်သည့်အရာတွေက ပိုအားသာနေသလဲ ဘယ်လိုကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ထားနိုင်သလဲ ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ထားလဲ၊ ဘယ်အရာတွေ ချို့ယွင်းနေလဲ လိုအပ်နေလဲ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အန္တရာယ်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီး အောင်မြင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်း အများဆုံးရရှိနိုင်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်ရှင့်။
အခုလိုအချိန်ပေးပြီး အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ‌နောက်လည်းယခုထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်မျှ‌ဝေသွားဦးမှာ ဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါဦးနော်။
Previous Post:Domain and Hosting
Next Post:Text Glow Animation